Waxa la ogeysiinayaa dhamaan akhristeyaasha mareegaha internetka ee xiiseeya ama curiya suugaanta in dhawaan mareegaha internetka lagu baahin doono silsilad-maanseed magaceedu yahay Aliflay, oo ay tahay markii koowaad ee lagu baahiyo saxaafadda iyada oo dhamaystiran.
1. Qofka silsilada ka soo qaybgalayaa waa in uu wada akhriyo dhamaan maansooyinka hadda silsilada ku jira oo ah 11 maanso.
2. Xaraf-raaca ay silsiladani ku arooraysaa waa shaqalada kala ah A, E, I, O Uiyo shaqalada dheer ee ah AA, EE, II, OO UU, waayo qofka maanso ka samanaya shaqalada waxa u banaaan suugaan ahaan in uu adeegsado shaqalka uu doono, waana sababta silsilada loogu bixiyay aliflay, markaa qofka silsilada soo gelayaa waa in uu ilaaliyo xaraf-raaca silsilada.\_
3. Bad-maanseedka ay silsiladani raacaysaa waa badda jiiftada, sidaas daraaeed waxa aad u munaasib ah in aan baddaas laga guurin inta silsiladan lagu gudo-jiro.
4. Silsiladan waxa ka reeban cayda, dacaayada, iyo shakhsi-weerarka, abwaanka ka soo qaybgalayaana waa in uu u hadlo si hufan, bilaa turxaan ah, hab qumanna uu aragtidiisa oo bilaa xajiin ah u dhiibto.
5. Qofka silsilada ka soo qaybgalaya, waxa aad u wanaagsan in uu aqoon fiican u leeyahay mawduucan diiniga ah ee laga hadlo, si aanay abwaanadu uga jawaabin wax aanay aqoon u lahayn, oo aanay u dhex muquuran mawjado dambi ah.
← SADDEXDA XISBI QARAN: Maxaa Lagu Kala Xantaa? Maxay se Ku Kala Duwan Yihiin?…Siyaasadda Miyey Ku Fashilmeen?!!!!